नयाँ आईपिडोस, आईप्याडका लागि अपरेटिंग प्रणाली, यहाँ छ। | आईफोन समाचार
नाचो अरागोनस | | आईप्याड
टिभीओएस १ about, वाचोस iOS र आईओएस १ about को बारेमा कुरा गरिसकेपछि, एप्पलले आफ्नो सबै शस्त्रागार निकालेको छ र पहिलो पटक आईप्याड, आईप्याडोसका लागि एक विशेष अपरेटिंग सिस्टम प्रस्तुत गरेको छ। अब, आईफोन र आईप्याडले अपरेटि system प्रणाली साझा गर्दैन, जुन आईप्याडको लागि लामो समयको लागि सोधियो।
नयाँ आईप्याड अपरेटिंग सिस्टम कार्यक्षमतामा फोकस गर्दछ, धेरै सर्टकटहरू थप गर्दै, मल्टिटास्किंगमा नयाँ सुविधाहरू, फाईल सुधारहरू र अधिक।
प्रयोगकर्ता अनुभव सुधार गर्न, एप्पलले अब तपाईंलाई आईप्याडको गृह स्क्रिनमा विजेटहरू पिन गर्न अनुमति दिन्छ, अनुप्रयोगहरूको बिचमा छोड्इएको ठाउँको अधिक प्रयोग गर्न।
स्प्लिट स्क्रीन iPadOS मा धेरै सुधार गर्दछ। अब हामी उही अनुप्रयोगको दुई विन्डोजहरू खोल्न सक्छौं, जस्तै नोट्स, मेल र तेस्रो-पार्टी अनुप्रयोगहरू जस्तै वर्ड। थप रूपमा, अब अनुप्रयोगहरू बीचमा खोजी गर्न सजिलो छ जुन हामीले स्लाइडओभरमा प्रयोग गरेका छौं, त्यस्तै प्रकारले जुन हामी आईओएस (आईफोन) मा अनुप्रयोगहरूसँग गर्छौं।
सबै खुला अनुप्रयोगहरू, स्प्लिट स्क्रिनहरू, इत्यादि राम्रो खोज्नको लागि, आईप्याडओएसले आईप्याडमा एक्सपोजé ल्याउँदछ, जहाँ हामी एक नजरमा प्रयोग गर्न सक्दछौं।
अन्त्यमा! अब हामी हाम्रो आईप्याडमा हार्ड ड्राइभहरू, पेन ड्राइभहरू र एसडी कार्डहरू जडान गर्न सक्छौं। नयाँ आईपडोस फाइल फाईल अनुप्रयोगमा यो नयाँ क्षमता र अन्य धेरै छ म्याकोसको शैलीमा र नयाँ व्यक्तिको साथ आईक्लाउड फोल्डरहरू साझेदारी गर्न सक्षम हुँदै नयाँ स्तम्भ दृश्य। थप रूपमा, क्यामेरा जडान गरेर, हामी तेस्रो-पार्टी अनुप्रयोगहरूबाट तस्बिरहरू पहुँच गर्न सक्दछौं, तिनीहरूलाई पहिले फोटोहरूमा आयात नगरी।
आईप्याडोसको लागि सफारीले पनि समाचार ल्याउँदछ। सफारीसँग अब पूर्ण डेस्कटप ब्राउजर अनुभव छ, वेबको डेस्कटप संस्करणहरू जबरजस्ती गर्दछ र यसका साथै यसले डाउनलोड प्रबन्धक र अधिक थप गर्दछ।
आईप्याडोसले अब बिभिन्न फन्टहरूको प्रयोगलाई अनुमति दिन्छ र लेखनको लागि आउँदा धेरै उत्तमहरू ल्याउँछ। आईप्याडओएसको साथ, यो वरिपरि सार्न र पाठ चयन गर्न धेरै सजिलो छ। अरु के छ त, तीन औंला इशाराहरूको साथ, हामी पाठ प्रतिलिपि गर्न र टाँस्न र कार्यहरू पूर्ववत गर्न सक्नुहुन्छ।
अन्तमा, एप्पल पेन्सिलमा समाचार। अब, एप्पल पेन्सिलको केवल mill मिलिसेकेन्ड ढिलाइको साथ एक द्रुत प्रतिक्रिया छ र नयाँ र color्ग प्यालेटहरू र भाँडाहरू।
लेखको पूर्ण मार्ग: आईफोन समाचार » आईप्याड » नयाँ आईपिडोस, आईप्याडका लागि अपरेटिंग प्रणाली, यहाँ छ।
र तपाइँ अन्तिममा यस संस्करणसँग उपयुक्त माउसको बारेमा केहि पनि टिप्पणी गर्नुहुन्न?
Klara लाई जवाफ दिनुहोस्
WWDC13 मा प्रस्तुतीकरण पछि यो आईओएस १ is हो